यी पुरुषले यसरी सुनाए १० वर्षसम्म श्रीमतीबाट बलात्कृत हुँदाको पीडादायी कथा « Sansar News
१६ असार २०७७, मंगलवार १०:०३
हामीमध्ये धेरैले महिलामाथि हुने अनेक प्रकारका घरेलु हिंसाको घटनाका बारेमा सुन्दै आएका छौं अनि संचारमाध्यममा पढ्दै पनि आएका छौं । तर, श्रीमतीद्धारा श्रीमान बलात्कृत भन्ने कुरा भन्ने कमै सुनेका छौं । भनिन्छ-यस्ता घरेलु तथा यौन हिंसामा परेका श्रीमानहरु श्रीमतीले आफूमाथि गरेको ज्याजदतिका बारेमा बाहिर कुरा ल्याउँदा समाज, आफन्त अनि साथीभाइले नै विस्वास गर्दैनन् भन्ने सोँचले उनीहरु भित्र-भित्र एक्लै संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् ।
त्यसैले धेरै पुरुषहरु यस्ता प्रकारका हिंसा भित्र–भित्रै सहेर बस्न बाध्य हुन्छन् । पुरुषले आफूमाथि घरेलु वा यौन हिंसा भयो भनेर कानुनी सहयोग लिएको वा बाहिर खुलेर आफ्नो पीडा सुनाएको विरलै पाइन्छ ।
तर, युक्रेनका एक पुरुषले भने आफू श्रीमतीबाट १० बर्षसम्म बलात्कृत भएको कथाको फेहरिस्त यसरी सुनाएका छन् ।
बाहिर हेर्दा म अत्यन्तै खुसी देखिन्थे
मलाई थाहा छैन कि, मेरा साथीहरु कसैलाई पनि मेरो यस्तो अवस्थाको बारेमा शंका भयो या भएन भन्ने । बाहिरबाट हेर्दा सबै राम्रो थियो । अनुहारमा मुस्कुराहट, पैसाको अभाव नभएको । आत्मविश्वासका साथ सायद हामीले आधा संसार घुम्यौं । जब हामी यात्रामा हुन्थ्यौ मलाई डर लाग्थेन, किनकि उ अरुको अगाडि मलाई बाधा पार्थिन । मलाई सबैभन्दा बढी डर यो थियो कि, उ एक्लै हुँदा उसँग कसरी बच्ने भन्ने । उसँगै विताएको १० वर्षपछि बल्ल मलाई महसुस भयो कि, म माथि बलात्कार भएको थियो ।
उ मेरो जिन्दगीमा आउने पहिलो युवती थिइ । जतिबेला हामी दुवैको भेट भयो, त्यतिबेला हाम्रो उमेर सायद २० वर्ष थियो कि । उसैले नै पहिले प्रेम प्रस्ताव राखेकी थिइ ।
हामीबीचको यौन सम्पर्क कम्तिमा पनि १-२ घण्टा हुन्थ्यो । सेक्स त्यस्तो हुनुपर्छ जसमा आफ्नो पनि इच्छा होस् । तर, मलाई कहिलेपनि यस्तो महसुस भएन । मलाई यसको कुनै पनि सुखद अनुभव भएन । मलाई लाग्यो सायद यौन सम्बन्ध यस्तै हुन्छ । त्यसैले पनि म उसँग सहमत हुन्थे । तर, एकदिन मैले ‘हुँदैन’ भने, तर उ रोकिइन । उक्त समय यो सम्बन्ध बलात्कारमा परिवर्तन भयो ।
मेरा आमा बुवाले भनेका थिए कि, यदि मैले कसैसँग डेट गरिरहेको छु भने, तुरुन्त घर छोड्नुपर्नेछ । अर्को शब्दमा उसँगको प्रेमका कारण मैले आफ्नो घर, परिवार सबै छोड्नुपर्ने थियो । आखिर भयो पनि त्यस्तै ।
मैले यस्तो कदम उठाएपछि मेरी आमा मसँग रिसाएकी थिइन् । त्यसकारण पनि मलाई पीडा भएको थियो । आमाको यस्तो व्यवहारका कारण पनि ममा आत्मसम्मानको एकदमै कमि भएको थियो ।
मैले पहिलोपटक अत्यन्त डराउँदै सेक्स गरेको थिए । त्यो समय हामीवीचको सेक्स सम्बन्ध सामान्य थिएन । पाँच घण्टासम्म चलेको यो सेक्स अत्यन्तै आक्रामक र पीडादायी थियो ।
म लामो समय काम गरेर थाकेको अवस्थामा हुन्थे । आराम गर्न चाहान्थे । तर इरा सेक्स चाहन्थी । उ भन्थी कि, ‘म लामो समयदेखि तिमीलाई पर्खिएर बसेकी छु । तिमी तयार हुनैपर्छ ।’ मैले अस्वीकार गर्दा उ म माथि मारपिट गर्न थाल्थी अनि, मेरो केही उपाय चल्थेन । उ आफ्ना नङले कोर्तथी । मलाई मुड्किले हान्थी । तर, देखिने गरी मेरो अनुहार या अन्य कुनै ठाउँमा चोट पुर्याउथीन । चोट दिन्थी त केवल अरुले नदेख्ने ठाउँमा ।
जब म फंसिसकेको थिए
मलाई एउटा लामो विजनेश यात्राको लागि जानु थियो । मैले इरालाई धेरै प्रेम गरेका कारण उसलाई गुमाउँछु कि भन्ने डर थियो । यसकारण मैले उसलाई सँगै लैजाने निधो गरे । अनि मैले नै उ सँग पहिले विहेको प्रस्ताव पनि राखे । उसले त्यतिबेला विवाह नगर्ने तर सँगै जानका लागि तयार भइ । त्यतिबेलादेखि म माथि उत्पीडन सुरु भएको थियो ।
मैले, कहिल्यै पनि उ माथि हात उठाइन । परिवारमा मलाई सानैदेखि यहि संस्कारमा हुर्काइएको थियो कि ‘महिलामाथि हात उठाउनु गलत हो ।’
मैले आफैलाई कमजोर महसुस गर्न लागेको थिए । इराबाट बचेर बाहिरको संसारमा पुग्न कुनै उपाय थिएन मसँग । मैले होटलमा छुट्टै कोठा लिएर बस्न चाहे तर यो हुन सकेन । मलाई कामबाट होटलमा आउन डर लाग्थ्यो । यसकारण म सपिङ मल, बजारमा घुमेर समय बिताउँथे । चिसोको मौसम थियो । मसँग तातो कपडा पनि थिएन । मलाई ज्वरो र इन्फेक्सन पनि भयो । तर, इरालाई मेरो बारेमा कुनै चिन्ता भएन । उसले त्यहि गरी जो उ चाहान्थी । सबैभन्दा पीडा त मलाई विदाको दिन हुन्थ्यो । शनिबार रातिबाट आइतबार बिहानसम्म उ मलाई जर्वजस्ती गर्थी । म युक्रेन फर्कने दिन गनेर बस्थे । मैले सोचे कि, इरासँग सम्बन्ध तोड्छु ।
मैले कोशिष गरे तर…
म आफ्नो आमा बुवासँग आए । मैले सोचे कि इराबाट टाढा बस्छु । उ सँग सम्पर्कमा बस्दिन भनेर फोन स्वीच अफ गरेर बसे । उसलाई सबै कुराबाट ब्लक गरेर म घरमै लुकेर बसे तर उ मेरो घरको ढोकामा आएर बस्थि अनि भन्थि ‘अब सबै ठिक हुनेछ ।’ एक्लोपन महसुस गरेको म, फेरि उसको साथमा गए । यो पटक उसले विवाह गर्न जोड दिइ । जतिबेला म उ बाट टाढा हुन चाहिरहेको थिए । तर पनि हामीले विहे गर्यौ ।
इरा अत्यन्तै इश्र्यालु थिइ । उ चाहन्थी कि, म मेरा साथीहरुसँग नभेटु । परिवारसँग नजाउ । चाहे जहाँ अनि जस्तो अवस्थामा भएपनि मैले उसको फोन उठाउनै पथ्र्यो । उ अचम्मका प्रश्न सोध्थी–तिमी त्यो मिटिङमा किन जान्छौं ? साथीहरुलाई किन भेट्छौं ? मलाई हरेक समय उसको छेउमा बस्नुपर्थो । म उसको लागि खेलौना जस्तो थिए, जो हरेक समय उसको मन बहलाउनका लागि बाध्य थिए ।
म काम गर्थे, इरा घरमै बस्थि । तर पनि मैले नै खाना बनाउँथे । सफाइ गर्थे । हामीले एउटा ठूलो अर्पाटमेन्ट भाडामा लिएका थियौं । तर, हाम्रो कोठामा बाथरुम हुँदा पनि इराले मलाई त्यो प्रयोग गर्न दिन्थीन, अनि मैले पाहुना बस्ने कोठाको बाथरुम प्रयोग गर्थे । हरेक विहान १० बजे उ उठ्ने प्रतिक्षा गर्नुपथ्र्यो । ताकि उसको निद्रा मेरा कारणले नबिथलियोस् । उसले यो तय गरी कि, हामी छुट्टाछुट्टै कोठामा सुतौं भनेर । तर, मैले कोठाको ढोका लगाउन नपाउने उसको शर्त थियो । छुट्टै कोठामा सुत्दा पनि मैले कहिले एक्लै आनन्दसँग सुत्न पाइनँ ।
जब मैले कुनै गल्ति गर्थे, उ चिच्याउँथी अनि मलाई पिट्न थाल्थी । यस्तो झण्डै दिनहुँ हुन्थ्यो । जे कुरामा पनि उ मलाई दोष दिन्थी । उ मलाई सधै सुनाउँथी कि, लोग्ने मान्छे भन्ने कस्तो हुन्छ र मैले के गर्नुपर्छ भनेर ।
म उसका अगाडि कमजोर थिए, उ जे भन्थी म त्यहि मान्थे । मलाई सम्झना छ कि, कहिलेकाँही म पार्किङमा राखेको कारभित्र बसेर रुन्थे । उ मेरो पछि-पछि आएर यो सब हेर्थी । अब यस्तो गर्दिन भन्थी । तर, उ आफूलाई रोक्न सक्थिन फेरि त्यहि व्यवहार दोहोर्याउँथी ।
सुरुका ३ वर्ष म सेक्सलाई मन मात्रै पराउँथीन । पछि ‘सेक्स’ भन्ने नाम सुन्दा पनि पीडा हुन्थ्यो । अट्याक होला जस्तो हुन्थ्यो । पछि उसले ममाथि जर्बजस्ती गर्न खोज्दा म उसलाई धक्का दिएर अन्तै गएर लुकेर बस्थे । धेरैपटक घरबाट पनि भागे ।
इरालाई लाथ्यो कि, हाम्रो सेक्स सम्बन्ध मेरा कारण विग्रिएको हो । उसले कतिपटक मलाई सेक्सोलोजिष्टसँग पनि पुर्याइ । सेक्सोलोजिष्टको अगाडि मैले ममाथि भएको बलात्कार र उत्पीडनको कुरा बताउन सक्थिनँ । त्यसैले पनि यो सारा दोष म माथि नै आइलाग्थ्यो ।
यसरी छुट्कारा पाए इराबाट
सायद त्यो मार्च महिनातिर थियो । पुराना पात झर्ने र नयाँपात पलाउने बेला थियो । मलाई एकदमै ज्वरो आएको थियो । म दुई साता विस्तरामा सुते । त्यतिबेला मेरो रेखदेख गर्ने कोही भएन । त्यतिबेला मलाई अझबढी महसुस भयो कि मेरी श्रीमति भनिएकी इरालाई यसले कुनै असर पारेन । म डर र पश्चातापले घेरिएको थिए । एकपटक आमा बुवालाई इराले गरेको ज्याजतिका बारेमा बताउन घर गए । त्यतिबेला आमा बुवा घरमा नभएकोले म एक्लै परे ।
उनले भनेका छन्, ‘यदि कोही युवाले मेरो कथा पढिरहेका छन् र उनीहरु पनि यस्तै अवस्थामा छन् भने यो बुझ्नुहोस्, भित्र भित्रै दवाएर बस्दा यस्तो पीडाले ज्यानै जान सक्छ । त्यसैले आफूलाई छिट्टै यस्ता प्रकारका समस्याबाट बचाउने कोशिष गर्नुहोस् ।’
एकदिन इन्टरनेटमा केही काम गर्दै थिए । विज्ञापनमा एक च्याटअप भयो । म त्यहाँ कुरा गर्न थाले । त्यहाँ सबैकुरा गोप्य हुन्थ्यो । मैले पहिलोपटक कसैलाई आफ्नो जिन्दगीको बारेमा कुरा राख्न थाले । उनीहरुले पनि म उत्पीडनमा परेको विस्वास गरेनन् । जब मैले उनीहरुलाई विस्वास दिलाउन थाले तब मैले एक थेरापिस्ट भेटे जसले मलाई धेरै सहयोग गरे ।
उनले यसरी नै आफूलाई सहयोग गर्ने केही सर्पोट ग्रुपको खोजी गरे । युक्रेनमा महिलाहरुका लागि मात्र यस्ता सर्पोट ग्रुप रहेकोले अनलाइनमार्फत् सन फ्रान्सिस्कोमा रहेको एक सर्पोट ग्रुप फेला पारे जसले यस्ता समस्या भएका पुरुषका लागि काम गथ्र्यो । उनले त्यहिबाट सहयोग लिएर अन्ततः श्रीमतीसँग डिर्भोस लिन सफल भएर श्रीमतीबाट १० वर्षसम्म पाएको पीडाबाट राहत महसुस गरेको उनले बिबिसीलाई बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘यदि कोही युवाले मेरो कथा पढिरहेका छन् र उनीहरु पनि यस्तै अवस्थामा छन् भने यो बुझ्नुहोस्, भित्र भित्रै दवाएर बस्दा यस्तो पीडाले ज्यानै जान सक्छ । त्यसैले आफूलाई छिट्टै यस्ता प्रकारका समस्याबाट बचाउने कोशिष गर्नुहोस् ।’ प्रतिकात्मक फोटो